जाडोमा हिटरकाे प्रयोग गर्नु हुदै छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस ! – ताजा समाचार
जाडोमा हिटरकाे प्रयोग गर्नु हुदै छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस !
धेरै मानिसहरु न्यानोका लागि ब्लोअर तथा हिटरको प्रयोग गर्ने गर्छन् । यद्यपि यसले मानिसको छालामा पार्ने असरको विषयमा भने उनीहरु अनजान हुन्छन् । त्यसैले हिटर चलाउँदाको समयमा आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ ।
६. यदि कोठामा हिटर चलिरहेको छ भने समय समयमा पानी खाइरहुनपर्छ । त्यसका साथै चिया, कफी वा सुप पिइरहनु राम्रो हुन्छ । यसले छाला सुख्खा हुनबाट केही कम गर्न सक्छ ।
जाडोमा हिटर किन्ने हो ? कस्ता हिटरकाे मूल्य कति?
जाडोमा मानिसहरु न्यानोका लागि हिटर किन्ने गर्दछन्। विषेशत घरमा बालबालिका र वृद्धवृद्धा भएका हरुको त प्राय धेरैले हिटर प्रयोग गर्ने गरेको उदाहरण हामी प्रशस्तै देख्न सक्छौ।
पछिल्ला केहि दिन यता हिटर किन्नेको चाप अत्याधिक बढेको काठमाडौ महाबैद्धका इलेक्ट्रिक सामान व्यापारी दिपक अग्रवाल बताउँछन्। जाडो याममा हिटरको बजार राम्रो रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। नेपाली बजारमा अहिले चिनिया र भारतिय हिटर किन्न पाइन्छ।
नेपालमा धेरै प्रकारका हिटर पाइन्छन्। त्यसमा ४ प्रकारका हिटर ब्यापक चलन चल्तीमा छन्। इलेक्ट्रीक हिटर, ग्यास हिटर, ग्यास प्लस इलेक्ट्रिक हिटर र फ्यान हिटर। यी सबैको आ–आफ्नो विशेषता र मूल्य छन्।
इलेक्ट्रीक हिटर –
जाडोमा प्रयोग गरिने इलेक्ट्रिक हिटर । बजारमा रु ७ सय रुपैयादेखि १ हजार रुपैयादेखि नै यो हिटर किन्न पाइन्छ । बिजुलीबाट चल्ने यो हिटरमा प्रयोग गरिएको रड अनुसार विद्युत खपत हुन्छ । सामान्यतया एउटा रडले ४ सय वाट विजुली खपत गर्ने गर्दछ ।
नेपालमा इलेक्ट्रिक हिटर व्यापक प्रचलनमा छन्। यसमा विषेशत ‘क्वार्डज्’ हिटर र ‘हेलोजिन’ हिटर पर्दछन्। क्वार्डज हिटरको बिशेषता भनेको यो विस्तारै तात्तिदै जान्छ र विस्तारै सेलाउँछ।
यसको आकार अरुको भन्दा सानो हुन्छ। यसलाई सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाँउमा लैजान सकिन्छ। यसमा विषेशतः दुई ओटा रडहरु हुन्छन्। यो हिटरको मूल्य ७ सय देखि १ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। यसको डिजाइनले पनि मूल्यमा धेर–थोर प्रभाव पार्ने ब्यवसायीहरु बताउँछन्।
त्यस्तै हलोजिन हिटर छिट्टो तात्तिन्छ र छिट्टै सेलाउँछ। यसमा सामान्यतया ३ ओटा रड हुन्छन्। यसको मूल्य कम्पनी र डिजाइन अनुसार एक हजार ६ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ।
अहिले बजारमा यो हिटरको माग उच्च भएको व्यापारीहरु बताउँछन्। यो हिटरले क्वार्डज हिटरले भन्दा बढी ताप दिन्छ।
फ्यान हिटरलाई बहुउपयोगी हिटर पनि भनिन्छ। यो पनि बिजुलीकै सहायताले चल्छ। यसले तातो हावा फालेर कोठालाई न्यानो बनाउछ। त्यस्तै यसलाई फ्यान् हिटर भनिएको हो।
गर्मी याममा यसको हिटलाई बन्द गरेर फ्यानको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। विभिन्न मोडल र डिजाइन र फिचर्सको आधारमा यसको मूल्य ९ सय देखि २ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने ब्यापारीहरु बताउँछन् ।
ग्याँस हिटर –
जाडो भएको बेलामा प्रयोग गरिने ग्यास हिटर । बजारमा रु ७ हजारदेखि माथिको मुल्यमा ग्यास हिटर किन्न पाइन्छ । एलपीजी ग्यासबाट चल्ने यो हिटरमा बालिने फ्लेमअनुसार ग्यास खपत हुन्छ ।
यो हिटर ग्यासको सहायताले चल्छ। ग्याँसको सहायताले चल्ने हुँदा लोडसेडिङले यसलाई कुनै प्रभाव पार्दैन्। पछिल्लो समय नेपालमा लोडसेडिङ हटेको कारण यसको माग केही कम भएको ब्यापारीहरुले जानकारी दिए। यसको मूल्य डिजाइन र कम्पनीको आधारमा ७ हजारदेखि ९ हजार रुपैयाँसम्म पर्दछ ।
ग्याँस प्लस इलेक्ट्रिक हिटर– ग्याँस र बिजुली दुबैबाट चल्ने हिटरलाइ ग्याँस प्लस इलेक्ट्रिक हिटर भनिन्छ। यसको मुल्य ८ हजार देखि १० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। यसलाई झ्टट् हेर्दा ग्याँस हिटर जस्तै देखिन्छ। यसको आकार पनि केही ठूलो हुन्छ। यो हिटरले आवश्यकता अनुसार ताप दिने भएकाले ठूलो परिवार भएकाहरुलाई बिशेष सुविधाजनक हुने व्यवसायीहरुको भनाई छ।
प्रकाशित भएको : December 15th, 2019